Inkcazo emfutshane yoMntu kunye noMfazi kunye nomntwana
Incwadi engavamile, ebhaliwe nje, ivula ii-vistas kwiindawo eziye zafihlakele kwiimfihlakalo iminyaka emininzi. Apha uya kufunda ukuba isinyathelo sokuqala sokuzalwa ngokutsha kokomoya kukuqonda ukuzalwa komntu kwimibumbi yokufa nokufa. Nanku, uya kufunda uqobo lwenu-into eyaziwayo emzimbeni-kunye nendlela onokuyiphula ngayo i-hypnotic spell yakho intsingiselo kunye nokucinga okuye kwashiya malunga nawe ukususela ebuntwaneni. Uya kuqonda, ngokukhanya kokucinga kwakho, kutheni umntu ebumnyameni ngokuphathelele kwimvelaphi yakhe kunye nesigqibo esiphezulu.
Ekuqaleni ebomini komzimba omtsha, okhulayo, u-Self uqala ukwenza ukulungiswa kwengqondo ekucingeni, ekuveleleni, nasekufuneni. Ukunyanzeliswa ngumoya walo, ngokuzenzekelayo uzibonakalisa ngokupheleleyo ngomzimba wayo kwaye ulahlekelwe yintsebenziswano kunye nolwazi lwayo oluphela. Umqashi ongekho nto, ekholelwa ngokuqinisekileyo ngokufa kwakhe, ngokusoloko elahlekelwa ithuba lokufumana indawo yayo efanelekileyo kwiCosmos kwaye akanako ukufezekisa injongo yayo. Indoda noMfazi kunye noMntwana ibonisa indlela yokusebenzisa eli thuba lokufumana ukuzifumana!
"Ezi zityholo azisekelwe kwiingcamango zengqondo. Ziyakuxhaswa ngobungqina be-anatomical, physiological, biological and psychological given herein, into enokuyenza, ukuba uthanda, uhlolisise, ucinge kwaye ugwebe; kwaye, yenza oko ucinga ukuba kukhe. "-HW Percival